नेपाली सेनाका दुई सय ४६ सैनिकलाई कोरोना संक्रमण, उपचारपछि ८४ जना ब्यारेक फर्किए
5:59 pm 2020-08-18
हालसम्म नेपाली सेनाका दुई सय ४६ जनालाई कोभिड– १९ को संक्रमण भेटिएको छ ।
जेठ दोस्रो साता पहिलो केस देखिएकोमा संक्रमितमध्ये हालसम्म ८४ जना निको भएर फर्केका छन् भने एक सय ६२ जना सेनाको आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत छन् ।
प्रदेश २ स्थित मध्यपूर्वी पृतनामातहतका सैनिक सबैभन्दा बढी संक्रमित छन् ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले उपचाररत सैनिकको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा अलिकति बढी देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा जम्मा २० जना उपचाररत छन् ।’
तर, जंगी अड्डामा अहिलेसम्म संक्रमित छैनन् । उपत्यकामा शिवपुरीस्थित अल्ले ब्यारेकमा कार्यरत सैनिकमा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
प्रदेश २ मा मध्यपूर्वी पृतनापतिसहितका सैनिक संक्रमित थिए । जेठ दोस्रो साता सुरुमा उनीहरूमा कोरोनाको संक्रमण भेटिएको थियो ।
पृतनापतिसहित पहिलो चरणका संक्रमित भएका सबै निको भएर कार्यक्षेत्रमा सक्रिय भइसकेका छन् ।
‘कोरोना पुष्टि भएका सैनिकहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । गम्भीर प्रकृतिका बिरामी कोही पनि भएको जानकारीमा छैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
विशेष गरी अग्रमोर्चामा काम गर्ने सैनिकहरूलाई कोरोना देखिएको छ । संक्रमित भएकामध्ये ब्यारेकबाहिर अग्रमोर्चामा खटिएका सैनिकहरू हुन् ।
नेपाल–भारत सीमानाकाका १० स्थानमा सैनिक खटिएका छन् । अनुमति लिएकाहरूलाई सीमानाका प्रवेशमा सहजीकरण गर्ने, होल्डिङ सेन्टर व्यवस्था गर्ने, हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्ने सेनालाई जिम्मेवारी छ ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका सात होल्डिङ सेन्टर सेनाले सञ्चालन गरिरहेको छ ।
हालसम्म विदेशबाट आएका करिब ५० हजारजनालाई होल्डिङ सेन्टर हुँदै घर पठाइएको छ । स्वाब संकलन, प्रकोप व्यवस्थापनमा पनि सैनिक कार्यरत छन् । शव व्यवस्थापनमा खटिएका सैनिकमध्ये सुरुमा तीनजनामा संक्रमण भेटिएपछि स्वास्थ्य प्रोटोकल नै परिवर्तन गरिएको सैनिक प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अहिले स्वास्थ्य प्रोटोकल पुनरावलोकन गरेपछि शव व्यवस्थापनमा खटिएकाहरू पनि सुरक्षित छन् ।’
सेनाले ब्यारेकभित्रै आइसोलेसन वार्ड राखेको छ । कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङका लागि सेनाले बेग्लै टिम तयार गरेको छ ।
काठमाडौंबाहिरबाट भित्र आउने सैनिकलाई १४ दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने बन्दोबस्त मिलाइएको पनि सैनिक प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलले भने, ‘हामी हरेक घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्छौँ र प्रोटोकल पुनरावलोकन गर्छौँ ।’
आज मात्रै कोरोनाबाट थप ४ को मृत्यु, देशभरीबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय १३ पुग्यो
4:05 pm 2020-08-18
कोरोना संक्रमणका कारण आज मात्र थप ४ जनाको मृत्यु भएको छ । ललितपुर, काभ्रे, बाँके र पोखरामा गरी ४ जनाको मृत्यु भएको हो ।
नेपाली कांग्रेस पश्चिम नवलपरासीका जिल्ला उपसभापति सुवासचन्द्र गिरीको आज उपचारको क्रममा ललितपुरको पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको कांग्रेस जिल्ला सभापति विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
निमोनिया समेत देखिएका ३८ वर्षीय गिरीमा कोरोना संक्रमण भएपछि बुटवलस्थित कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
साउन ३० गते पाटन अस्पताल भर्ना गरीएका उनको अवस्था गम्भिर भएपछि हिजो साँझ भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार सुरु गरिएको थियो ।
यस्तै, बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा उपचाररत एक जना कोरोना संक्रमित पुरुषको गएराति मृत्यु भएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ५ का ६२ वर्षीय पुरुषको उपचारकै क्रममा निधन भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणसहितको ज्वरो आएपछि उहाँ साउन ३२ गते मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनुभएको थियो । हिजो दिउँसो उहाँको पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो ।
हिजो नै निमोनिया देखिएको र श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि राति पौने १२ बजेतिर मृत्यु भएको हो । योसँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको छ ।
उता, काभ्रेको धुलिखेलमा कोरोना संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । धुलिखेल अस्पतालमा उपचाररत धुलिखेल– ७ का ९८ वर्षिय पुरुषको आज मृत्यु भएको हो ।
स्वासप्रश्वास र घाँटीमा सममस्या भएपछि उन्लाई साउन २६ गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । कोरोना पुष्टि भएपछि उनलाई आइसीयुमा राखेर उपचार गरिएको थियो ।
यस्तै, कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकी तनहुँकी एक महिलाको पोखरामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।
तनहुँ ब्यास–१ अम्रेनीकी ५० वर्षीया महिलाको पोखराको कास्की सेवा अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो । यो सगै देशभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जानेको संख्या १ सय १३ पुगेको छ ।
टेकु प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पर्साका थप ६८ जनामा कोरोना संक्रमण
3:56 pm 2020-08-18
एकैदिन थपिए १२५ जना संक्रमित
वीरगन्ज — भाद्र २, २०७७।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा पर्साका थप ६८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । गत साउन २६ र २७ मा नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा पीसीआर किट अभाव भएपछि ११ सयभन्दा बढी स्वाब परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशाला काठमाडौं पठाइएको थियो ।
वीरगन्ज महानगरपालिका–११ श्रीपुर विधापीठ विद्यालयमा स्वाब दिएकामध्ये ५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निरीक्षक जयमोद ठाकुरले बताए । त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा स्वाब दिएका ११ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
हेटौंडामा ११ प्रहरीसहित थप १६ जनामा कोरोना पुष्टि
7:47 pm 2020-08-17
हेटौंडा — भाद्र १, २०७७।
मकवानपुरको हेटौंडामा कार्यरत् ११ जना प्रहरीसहित हेटौंडामा थप १६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
हेटौंडास्थित कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सोमबार थप १६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
नेपाल प्रहरीमा कार्यरत् रौतहटका दुईजना, सिन्धुलीका एकजना, बाँकेका दुईजना, पर्साका एकजना, धादिङका एकजना, कञ्चनपुरका एकजना र हेटौंडामा कार्यरत् चितवनका तीनजना प्रहरीमा कोरोना देखिएको हो ।
यस्तै, हेटौंडा उपमहानगरपालिका-४ बस्ने तीन महिला र एक पुरुष तथा हेटौंडा-१० मा बस्ने एकजना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हेटौंडा उपमहानगरका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोलाप्रसाद चौलागाइँले बताउनुभयो ।
संक्रमित हुने प्रहरी ११ जना नै पुरुष रहेका जनाइएको छ ।
पर्सामा मेयरसहित ९२ जना कोरोना संक्रमित, धरानमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि
4:52 pm 2020-08-17
पर्सा — भाद्र १, २०७७।
पर्सामा थप ९२ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ ।
पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका गरी ९२ जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर निरज सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न पालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाको स्वाब परीक्षण गर्दा ९२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
यसैगरी, सुनसरीको धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठानका थप चारजना स्टाफ नर्समा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
प्रतिष्ठानको मेटरनल आईसियूमा कार्यरत चारजना नर्समा संक्रमण पुष्टि भएको प्रतिष्ठानको मेडिसिन विभाग प्रमुख डाक्टर संजिवकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
इलाममा सुविधा सम्पन्न निजी अस्पताल एपोलो हष्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टर प्रा.लि. संचालनको तयारी
3:52 pm 2020-08-17
इलाम — भाद्र १, २०७७।
एक मात्र सरकारी अस्पताल भएको इलाममा सुविधासम्पन्न निजी अस्पताल सञ्चालनको तयारी भएको छ ।
सदरमुकाममा इलाम एपोलो हष्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टर प्रा.लि. संचालनको तयारी भएको हो ।
यहाँ सञ्चालित एक मात्र सामुदायिक अस्पताल केही वर्ष अगाडी बन्द भएपछि जिल्लावासीले उपचारका लागि तराईका जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सामान्य ज्वरो आउँदासमेत जिल्लाबासीले थप उपचार गर्न झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लामा जानु पर्ने समस्याको अन्त्य गर्न हस्पिटल संचालन गर्न लागिएको अस्पतालका संचालक प्रकाश चापागाइँ बताउनुहुन्छ ।
जिल्लाको सरकारी अस्पतालको रुपमा रहको इलाम अस्पताल भौतिक रुपमा सम्पन्न भएपनि दरबन्दी अनुसारको विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा इलामेलीहरुले भने जस्तो सेवा लिन पाएका छैनन् ।
झण्डै तीन करोडको लगानीमा संचालन गर्न लागिएको अस्पतालमा चार जना विशेषज्ञसहितको सेवा दिने तयारी भइरहेको छ ।
यो अस्पताल पुरानो मेघबहादुर सामुदायिक अस्पतालकै भवनमा सञ्चालन हुनेछ । सुरुमा अस्पतालमा हाडजोर्नी, स्त्री तथा प्रसुती, रेडियोलोजी एवम् जनरल फिजिसियनको सेवा प्रदान गरिने छ ।
साथै छ महिना भित्रमा आइसियु र एनआइसियुसहितको सेवा सञ्चालन गर्ने डाक्टर विवेक अधिकारीको भनाइ छ ।
अस्पताल आगामी भदौ ९ गतेबाट संचालन हुँदैछ । कुशल व्यवस्थापन र अस्पतालको दिगोपनका विषयमा सञ्चालकहरुले ध्यान दिन सके जिल्लाबासीका साथै पुर्वी पहाडका जिल्ला पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग र तेह्रथुमका केही भुभागका बासिन्दालाईसमेत ठुलो राहत मिल्ने देखिन्छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय ६ पुग्यो
3:15 pm 2020-08-17
नेपालमा कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय ६ पुगेको छ । वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएका रौतहटका युवकमा पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
३२ वर्षका ती युवकको हिजो परिक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको नारायणी अस्थायी कोरोना विशेष अस्पतालले जनाएको छ ।
यसअघि हिजै ललितपुरको पाटन अस्पतालमा पनि एक जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका थिए । गत साउन २० गतेदेखि अस्पतालमा उपचार गराइरहेका काठमाडौंका ६० वर्षीय पुरुषको निधन भएको स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले हिजो दिउँसो गरिएको प्रेस ब्रिफिङमा नेपालमा कोरोनाबाट १ सय ४ जनाले ज्यान गुमाएको जनाकारी दिनुभएको थियो ।
तर त्यसपछि ललितपुरमा एक र विरगञ्जमा एक मृतक थपिएसँगै देशभर कुल मृतकको संख्या १ सय ६ पुगेको हो । ्र
प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो पटक १२ हजार २ सय ४७ जनामा गरीएको पीसीआर परीक्षणमा ६४१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो ।
यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या २६ हजार ६ सय ६० पुगेको छ । हिजो थपिएका संक्रमितमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाका रहेका छन् । उपत्यकामा मात्रै १ सय ७२ जना थपिएका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १२६, ललितपुरमा ३८ र भक्तपुरमा ८ जना संक्रमित भेटिएका हुन् ।
मुलुकभरीका ४१ जिल्लामा पूर्ण वा आंशिक लकडाउन, कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा
3:06 pm 2020-08-17
देशभर कोरोना भाइरसको संक्रणम बढ्न थालेपछि ४१ जिल्लामा पूर्ण वा आंशिक लकडाउन गरिएको छ ।
संक्रमण रोकथाम तथा नियनत्रणका लागि कतै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातमत निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने कतै स्थानीय तहले निर्णय गरेर अत्यावश्यकबाहेकका व्यवसायमा रोक लगाएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार हिजोसम्म ४१ जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण लकडाउन गरिएको छ । २८ जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनअनुसार निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् ।
अन्य जिल्लामा स्थानीय तहले लकडाउन लागू गरेका छन् । पर्सा, सप्तरी, बाँके, बारा, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा, बर्दिया, रौतहट, कपिलवस्तु, दोलखा, नवलपरासी पश्चिम, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रामेछापमा जिल्लाभरि नै लागू हुने गरी निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।
नुवाकोटमा ६ स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा छ भने जिल्लाभरी नै अत्यावश्यकबाहेकका सेवामा रोक लगाइएको छ ।
‘रेडजोन’मा भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा भने निषेधाज्ञा जारी गरिएको छैन । तर, विभिन्न सेवा बन्द गरिएका छन् । मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले लकडाउन नै लागू गरेको छ ।
कागेश्वरी मनहराले पनि अत्यावश्यकबाहेकको व्यवसाय बन्द गराएको छ । उपत्यकामा सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ ।
त्यस्तै रेस्टुरेन्ट, सैलुन र जिमखाना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका छन् । अटेर गर्नेहरूलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ ।
सरकारले दुई सयभन्दा धेरै संक्रमित भएको जिल्लालाई ‘रेडजोन’मा राखेको छ । हाल काठमाडौं, मोरङ, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र बाँके ‘रेडजोन’मा छन् ।
यीमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा एक हजार चार सय २९ र पर्सामा एक हजार ८४ सक्रिय संक्रमित छन् ।
7:51 pm 2020-08-14
काठमाडौँ — श्रावण ३०, २०७७ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लु एच.ओले प्याकिङ गरिएको खानेकुराबाट कोरोना भाइरस सर्न सक्ने कुनै प्रमाण नभेटिएको दाबी गरेको छ ।
चीनको सेन्जेन सहरमा ब्राजिलबाट निर्यात गरिएको फ्रोजन कुखुराको मासुको प्याकेजिङ जाँच गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको तर सो प्याकेजिङसँग सम्पर्कमा आएका सबै मानिस तुरुन्तै पत्ता लगाएर परीक्षण गर्दा भने नतिजा नेगेटिभ आएको बताइएको छ ।
यस सम्बन्धी डब्लूएचओका आपत्कालीन कार्यक्रम प्रमुख माइक रायनले मानिसहरूले खानेकुरा, त्यसको प्याकेजिङ, प्रोसेसिङ या डेलिभरी गरिएका खानेकुरासँग डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाउनुभएको छ ।
उहाँले हालसम्म भाइरस खानेकुराका माध्यमबाट सरेको कुनै प्रमाण नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
कोरोनाको महमारी सुरु भएदेखि चीनले बाहिरबाट आएका खानेकुराहरुको प्याकेजहरूको जाँच गर्दै आएकोमा कम मात्र खानेकुराको प्याकिङमा भाइरस पोजेटिभ भेटिएका छन् ।
यता ब्राजिलले पनि चीनमा खानेकुराको प्याकिङमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको बिषयलाई लिएर यसबारे अनुसन्धान गर्न आफना देशका स्वास्थ्यबिदहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
भियाग्राको सेवनले अन्धोपना निम्त्याउन सक्ने : अनुसन्धान
5:10 pm 2020-08-13
काठमाडौँ — श्रावण २९, २०७७।